ko htike's prosaic collection: ဗုံးခိုကျင်းများနှင့် ဗိုလ်ချုပ်များ၏ စံအိမ်တော်များ
ဗုံးခိုကျင်းများနှင့် ဗိုလ်ချုပ်များ၏ စံအိမ်တော်များ
နေပြည်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးနေရာ၊ တစ်နေရာမှာ၊ စစ်အစိုးရရဲ့ထိပ်သီး၊ အခွင့်ထူးခံဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၊ ဝန်ကြီးများအတွက်၊ ကိုယ်ပိုင်အိမ်ရာဆောက်လုပ်နေထိုင်ဘို့၊ စစ်အာဏာရှင်ကြီး၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ကမြေနေရာတွေ၊ ခွဲတမ်းချထားပေးခဲ့ပါတယ်။
ရည်ရွယ်ချက်ကတော့၊ မကြာခင်လာတော့မဲ့၊ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မှီ၊ ကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲ့စည်းတဲ့အခါ၊ ဝန်ကြီးများ၊ ဒုဝန်ကြီးများဟာ၊ ယခုလက်ရှိနေထိုင်ရာ၊ နေရာကနေဖယ်ရှားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုဖယ် ပေးလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်၊ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရှိရေးဆောင်ရွက်ရာမှာ၊ နီးနီးကပ်ကပ်စည်းစည်းလုံးလုံး၊ စုပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ ရည်ရွယ်ပြီး၊ ယခုလိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်စေတာပါ။
ဒါပေမဲ့တပ်ချုပ်ကြီးရဲ့တကယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ကြမဲ့၊ အဲဒီ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို၊ အနီး ကပ်စောင့်ကြည့်နိုင်ဘို့နဲ့၊ သစ္စာဖောက်တဲ့သူရှိလာခဲ့ရင်တော့၊ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေကို၊ ဓါးစာခံအဖြစ် အလွယ်တကူဖမ်းဆီးနိုင်ဘို့၊ စီစဉ်ထားတာပါလို့၊ နေပြည်တော်စစ်ရုံးချုပ်အသိုင်းအဝိုင်းမှသတင်းရရှိပါတယ်။
ဘာရည်ရွယ်ချက်တွေ၊ နောက်ကွယ်မှာရှိရှိ၊ အိမ်ရာတွေကိုတော့၊ အလျှင်အမြန်ဆောက်လုပ်နေကြရပါဘီ။ ချမ်းသာတဲ့ဝန်ကြီးတွေကတော့၊ ရှေးခေတ်ပုံစံနန်းတော်ကြီးတွေလို၊ အိမ်တော်အကြီးကြီးတွေကို၊ ဆောက် လုပ်နေကြပြီး၊ ဆင်းရဲ့တဲ့ဝန်ကြီးတွေကတော့၊ နဲနဲသေးတဲ့အိမ်တော်တွေဆောက်လုပ်နေကြပါတယ်။ (ဆောက်လုပ်ထားတဲ့၊ အိမ်အကြီးအသေးတွေကိုကြည့်ပြီး၊ ဘယ်သူတွေဘယ်လောက်တောင်လာဘ်စား ထားသလဲဆိုတာ၊ မီတာထောက်တိုင်းစရာမလိုဘဲ၊ သိနိုင်ပါတယ်လို့၊ စစ်အင်ဂျင်နီယာတဦးက၊ မှတ်ချက်ချ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။)
ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့အကြီးအသေးစုံလင်လှတဲ့၊ အဲဒီအဆောက်အဦးတွေမှာ၊ တူညီတာအခုကို၊ ထူးထူးဆန်းဆန်း သွားတွေ့ရပါတယ်။ ဒါကတော့အိမ်တိုင်းမှာ၊ ဗုံးခိုကျင်းတွေထည့်သွင်းဆောက်လုပ်နေကြတာပါဘဲ။
တပ်ချုပ်ကြီးအမိန့်ကြောင့်လား? ဒါမှမဟုတ်၊ ဝန်ကြီး၊ဝန်ကလေးတွေဆဋ္ဌမအာရုံရပြီး၊ မမျှော်လင့်တဲ့နေရာ ကလာမဲ့၊ အန္တာရယ်တွေကို၊ ကာကွယ်ဘို့လား?
တပ်ချုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်သူ့နေပြည်တော်ကြီးမလုံခြုံတော့ဘူးလို့ယူဆနေပြီလား? ဒါမှမဟုတ်၊ ဝန်ကြီး၊ ဝန်က လေးများ၊ ကိုယ်တိုင်ကဘဲလုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တယ်ထင်လို့လုပ်နေကြတာလား?
Generals and Ministers Estate in Nay-Pyi-Taw built with bomb shelters.
One of the very exclusive areas in Nay-Pyi-Taw was specially assigned for elites of Burma. Ruling Junta took that place and divided among them to build their own resident for the purpose of moving in at the time of when they are resigning from their post and interim government taking over the administration.
Their official resident will be taken over by interim government Ministers at that time but they need to stay closely each other for preparing how to cheat in forthcoming election plus U Than Shwe wants to scrutinize them closely under his watchful eyes and their families became hostages in the cruel hands of Than Shwe if and when necessary.
No matter of whatever reasons for them are behind, they all have to build their residents with own arrangement. Rich minister built his home as big as old time cinema hall and poor deputy minister built just slightly bigger than car garage. People can see different type of building coming up and that isagauge for measuring the degree of corruption among the ministers.
All that buildings with different types and style are coming up one after another but they all built one structure in common, which in every house of big and small, “bomb shelter” was specially built and included in every house. No one knows whether it was instructed by higher authority or all owners are having six senses to protect themselves. We are wondering whether U Than Shwe instruct them to do so as he is not certain for their safety in country’s capital or purely the own initiative of the residents.